ကောင်းကင်ကို: မျက်နှာနှစ်ဘက်နဲ့ ဒင်္ဂါးတစ်စေ့
အစိမ်းရောင်နဲ့ ရေးထားတာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့တဲ့ စကားနဲ့ ဆရာကြီးဒေါက်တာ သန်းထွန်း ရေးခဲ့တဲ့ စာပါ။ ဆရာကြီးဒေါက်တာ သန်းထွန်းပြောခဲ့တဲ့ စကားက နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ပြောခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ဆရာတွေကို ပြောခဲ့တာပါ။
Posted by Kaung Kin Ko at 5:10 PM
နိုင်ငံရေးဟာ ဆာရီရဲယ်လ် ပန်းချီကားတချပ်
နိုင်ငံရေးဟာ အဖြူအမဲ ဓါတ်ပုံတပုံ
အကို့ကိုလည်း ကဗျာတပိုဒ် ဖြည့်ခွင့်ပေး ညီလေး။
နိုင်ငံရေးဟာ တစ်တောလုံး စိမ်းစိုဖို့ ကိုယ်စီ ဝေဆာပေးရမယ့် သစ်ပင်...တဲ့လား။
မှန်လိုက်တာ အကိုရယ်...။ နိုင်ငံရေးအသိ မရှိတဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေနိုင်ကြတုန်းပါပဲ။ သူတို့အတွက် နိုင်ငံရေးဆိုတာ မလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ သဘောထားနေကြတာလေ...။ အဲဒီတော့ တစ်တောလုံးလဲ မစိမ်းစိုနိုင်သေးဘူးပေါ့...။
မျက်နှာနှစ်ဘက်နဲ့ ဒင်္ဂါးတစ်စေ့ကို အရောင်တူအဆင်ကွဲ ဒင်္ဂါးစေ့ပေါင်းများစွာဖြစ်အောင် ဖန်တီးတတ်တာကပဲ ကဗျာဆရာရဲ့မှော်အတတ်လား…
ဆရာ့ရဲ့ မျက်နှာနှစ်ဘက်နဲ့ ဒင်္ဂါးတစ်စေ့ကို လာဖတ်သွားတယ်။ ဆရာကတော့ အမြဲလက်စွမ်းထက်နေတာပဲ။ :D
“ယားနာတွေကို ဖုံးဖို့ ထဘီရှည်ရှည် ဝတ်ပြီး အိနြေ္ဒရှင်ယောင် ဆောင်ထားတဲ့ အပျိုမ”
အစ်ကို့ အရေးအသားတွေကတော့ အမြဲသစ်လွင်နေတယ်နော်..
နှစ်ခါပြန်ဖတ်မိတယ် တစ်ခုစီကိုလည်း သေချာတွေးနေမိတယ်..
နိုင်ငံရေးဟာ ဆားခတ်များသွားသော ငံလွန်းတဲ့ အဆိပ်တစ်ခွက်..
"နိုင်ငံရေးဟာ ထောင်ထဲမှာ လူမသိသူမသိ သေသွားရှာတဲ့ အညတရ ကျောင်းသားတစ်ယောက်
နိုင်ငံရေးဟာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ အဝေးက အာဇာနည် တစ်ယောက်"
ဒင်္ဂါးတစ်စေ့ကို လှလှပပ နဲ့မျက်နှာနှစ်ဘက်လုံး မြင်အောင်ပြ နိုင်လေခြင်းလို့ပဲ ပြောပါစေတော့..
နိုင်ငံရေးဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ နိုင်ငံရဲ့အရေးပဲ။
စကားလုံးတွေ ဖောင်းကြွအောင် ဆော်ဒါ များများထည့်ရင်
August 6, 2008 at 5:45 AM
I like this post !!!!
အရမ်းကောင်းတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်။ ထက်မြက်လိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေဗျာ။ အရမ်းလေးစားတယ်အစ်ကို... ဆက်လျောက်ဗျာ။ အမြဲအားပေးလျက်...
စကားလုံးတွေ အားကောင်း၊ ပြင်းထန်၊ သိပ်သည်းလှချည်လား အကိုရာ...။ ရိုက်ချက်တွေက နုလုံးသားကိုလာစိုက်တယ်။
nothing much to say. only 1 word * like * it. :) supporting always.
if you love the truth and freedom,
if you really stand for that,
don't make things comfuse!
you can say POLITICS meansalots!
but the politics that you are believing in is notarubbish!
just takealittle of care of whatever you write about!
veryy veryy effectivee direct to te heart
အရှုံးခြင်းထဲက အမုန်းစာရင်း တစ်ရွက်
ချောင်းဟန့် သံ (ဂျိုဇော်)
ချီကွေဗားရား ရွတ်တဲ့ ကဗျာ